Maxaad u Dooratay CHPW? - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Ku saabsan CHPW > Maxaad u Dooratay CHPW?
Maxaad u Dooratay CHPW?
Adiga. Xarunta qoyskaaga, bulshadaada iyo daryeelkaaga caafimaad.
Adiga. Xarunta qoyskaaga, bulshadaada, iyo daryeelkaaga caafimaad.
Ku dhowaad 30 sano, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) ayaa la bixinayey daryeel caafimaad oo tayo leh qoysaska Washington iyo taageerida xulashooyinkaaga daryeelka caafimaadka.
Daryeelka caafimaadka ee tayada leh waxaa loola jeedaa:
Waxaad tahay xarunta
Daryeelka oo dhami adiga ayuu ka bilaabmaa-qofka garanaya caafimaadkaaga ayaa sida ugu fiican ugu baahan. Waan ku dhageysaneynaa waana kula shaqeyneynaa si aan u helno xalka ugu fiican.
Waxaad haysataa ikhtiyaarro
Sharaf bay noo tahay inaan nahay qorshaha daryeelka caafimaadka ee kula shaqeynaya, mana u qaadaneyno xulashadaada mid la iska indhatiray.
Waxaad mudan tahay dhaqaatiir heer sare ah
Xubnaha CHPW waxay yiraahdaan shabakadeena bixiyeyaasha daryeelka caafimaad ee ka go'an waa mid ka mid ah awoodayada ugu weyn.
Waxaad leedahay xuquuq
Waxaan halkaan u nimid inaan hubino inaad ku qanacsan tahay daryeelkaaga oo si cadaalad ah laguula dhaqmay.
“Bulsho” magac kaliya ma ahan, ee waa sida aan u shaqeyno.
Waxaan ku bilownay bilowgii bulshada Washington. Waxbadan ayaanu kornay sanadihii la soo dhaafay, laakiin diiradeena maxaliga ahi sideedii bay ahaatay.
Waan kuu dhownahay. Shabakadda CHPW ee 20 Xarumaha Caafimaadka Bulshada waxay ka shaqeysaa in ka badan 180 xarumo caafimaad oo ku baahsan gobolka oo dhan, iyadoo la shaqeyneysa in ka badan 2,700 bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah iyo 14,700 takhasusleyaal ah. Shabakadeena waxaa ka mid ah in ka badan 100 cosbitaal.
Waxaan nahay reer Washington. Waxaan raacnaa isla basaska aad raacdo, waxaan booqanaa isla maktabadaha, waxaanan kaqeybgala isla kulamada PTA.
Waan is tusnaa. Xubnaha kooxdayadu waxay kaqeybgalaan xafladaha maxaliga ah dhamaan Washington, laga bilaabo bandhigyada fasaxa ilaa bulshada ay isugu imaato.
Waxaad helaysaa caymis ku saabsan caafimaadkaaga oo dhan.
Duruufahaaga gaarka ah — magaaladaada, qoyskaaga, yoolalkaaga, waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay - dhammaantood waxay door ka ciyaarayaan qaabeynta caafimaadkaaga. Waxaad tahay qof dhan, taas oo ah sababta aan ugu tababbaranno daryeelka qofka oo dhan.
Daryeelka qofka oo dhan waxaa loola jeedaa:
Waxaan nahay koox. Waxaan gacan-qabsi kula shaqeynaa adiga iyo dhamaan kooxdaada daryeelka caafimaadka, sidaa darteed way kuu fududaanaysaa inaad hesho daryeelka aad u baahan tahay. Waxaan isu keeneynaa qof walba si aan ugala tashanno caafimaadkaaga si loo raadsado xulashooyinkaaga daryeelka ugu fiican.
Waxaan daweynaa qayb kasta oo idinka mid ah. Qorshaheennu wuxuu tixgelinayaa caafimaadkaaga jireed, caafimaadka maskaxda, caafimaadka habdhaqanka (oo ay ku jiraan caadooyinka, nafaqada, iyo jimicsiga), iyo baahida loo qoro.
Daryeelkaaga caafimaad wuxuu ku saabsan yahay in ka badan booqashooyinka dhakhtarka. Mararka qaarkood, waxaad u baahan tahay bulshadaada inay soo dhex gasho oo ay caawiso. Waxaan kugu xirieynaa ilaha maxaliga ah ee guryaha, cuntada, tababarka shaqada, soo kabashada isticmaalka maandooriyaha, iyo inbadan.
Si aad isugu qorto CHPW, waa inaad marka hore iska diiwaangelisaa Washington Apple Health (Medicaid). Adeegga Macaamiisha ee CHPW ayaa kaa caawin kara inaad iska diiwaangeliso Apple Health isla markaana aad telefoonka ugu dhex marto Washington Healthplanfinder. Waxay hubin doonaan inaad haysato dhammaan dukumiintiyada aad u baahan tahay inaad saxiixdo waxayna kaa caawin karaan habka dalabka.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: May 27, 2021